Ama-suites amahle, Anethezekile (Opp Ksi City Mall) - I-Airbnb
Ama-suites amahle, Anethezekile (Opp Ksi City Mall)
Ikamelo e-ifulethi elisevisiwe ibungazwe ngu-Ellen
Uzojabulela uthando lokwamukela izihambi nabasebenzi bethu abangochwepheshe kuma-suites ethu amahle. Igumbi lethu elinefenisha encane kodwa enhle likuqinisekisa ukunethezeka okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Iningi lamakamelo ethu anovulandi wangasese lapho ungahlala khona ukuze ufunde incwadi noma ujabulele umoya opholile. Sivulekele ukusingatha abantu ngabanye namaqembu.
Isakhiwo sethu sisendaweni evikelekile. Sitholakala maqondana nenxanxathela yezitolo yaseKumasi, eduze kwe-KFC ne-Starbites restaurant. Sizungezwe izitolo eziningi, izindawo zokudlela (lapho kunikezwa khona ukudla kwasendaweni nezwekazi) kanye nezindawo zokudlela ezenza kube lula ngawe ukuthi uthole ukudla negilosa. Futhi siseduze nezindawo ezibalulekile nezindawo zezivakashi ezifana neSigodlo saseManhyia, iMakethe yaseKejetia, iSibhedlela Sokufundisa sase-Komfo Anokye, i-Kumasi Zoo, iMnyuziyamu Yezempi, iNyuvesi Yesayensi Nobuchwepheshe Kwame Nkrumah, kanye nezinye. Sikuma-36mins uma ushayela usuka e-Bonwire lapho kwenziwa khona indwangu enhle ye-kente kanye nokushayela okungu-60mins ukusuka eLake Bosomtwe(okuwukuphela kwechibi lemvelo eGhana).
Ifulethi elisenkabeni yedolobha laseKumasi. Iqhele ngamamitha angu-450 ukusuka enxanxatheleni yezitolo yaseKumasi enezindawo zokudlela eziningi kanye neklabhu yasebusuku, amamitha angu-500 ukusuka e-KFC kanye ne-Star-bites, amamitha angu-220 ukusuka eThempelini laseMckenzi kanye nohambo lwemizuzu emine (4) ukuya enkundleni yezemidlalo eKumasi. Kukhona inqwaba yezindawo zokudlela namashibhi nezinye izinsiza ezithakazelisayo endaweni yethu.
Ngithanda ukuzijabulisa nesivakashi futhi ngihlale ngitholakalela imibuzo ngezingcingo, umbhalo noma ama-imeyili.